Ii-FAQs-Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
1. Loluphi ulwazi ekufuneka lunike i-skid yonyango lwegesi yendalo?
1. Ukwakheka kwerhasi eneenkcukacha: mol%
2. Ukuhamba: Nm3/d
3. Uxinzelelo lokungena: I-Psi okanye i-MPa
4. Ubushushu bokungena: °C
5. Isiza kunye neemeko zemozulu, ezifana neemeko zemeteorological (ikakhulukazi ubushushu bemekobume, nokuba ikufuphi nolwandle), amandla ombane ombane, nokuba kukho umoya wesixhobo, amanzi okupholisa (ngokweemfuno zokwenyani zenkqubo),
6. Yila kwaye wenze ikhowudi kunye nemigangatho.
2. Ude kangakanani umjikelo wemveliso?
Kuxhomekeke kwiimveliso ezahlukeneyo, ngokuqhelekileyo iinyanga ezi-2 ukuya kwezi-4.
3.Ziziphi iinkonzo onokubonelela ngazo?
Asikwazi ukwenza kuphela zonke iintlobo zezixhobo ngokwemizobo yakho, kodwa sinokubonelela ngesisombululo esineenkcukacha ngokweemfuno zakho ezithile.
4. Kuthekani ngenkonzo emva kwentengiso?
Sinikezela ngezincedisi kunye nencwadana yokusebenza, kwaye sikhokela abathengi ukuba bafake kunye nekhomishini kwisiza.Ukuba kukho naziphi na iingxaki kwinkqubo yokusetyenziswa, siya kunika isikhokelo sevidiyo kwaye sijongane nazo xa kuyimfuneko.
5. Loluphi uluhlu lwemveliso yakho?
Sisebenza ngokukhethekileyo kuyilo, i-R&D, ukuvelisa, ukufakwa, kunye nenkonzo yokusebenza kweentlobo ngeentlobo zeoyile kunye negesi kwintsimi yonyango lwentloko yentloko, ukucocwa kwegesi yendalo, unyango lwe-oyile ekrwada, ukubuyiswa kwe-hydrocarbon ekhanyayo kunye neseti egcweleyo yegesi yendalo, ijenereyitha yegesi yendalo. .
Iimveliso eziphambili zezi:
Izixhobo zonyango lwe-Wellhead
Izixhobo zokulungisa igesi yendalo
Iyunithi yokubuyisela i-hydrocarbon yokukhanya
Izixhobo zokunyanga i-oyile ekrwada
Ijenereyitha yegesi yendalo